Push Kubatsira Wiricheya - Propulsion Inobatsira Midziyo
Rudzi rwechigaro ndirwo rudzi rwakagadzirirwa kusundidzirwa nemumwe asiri iye wiricheya mushandisi. “Push assist” zvinoreva mushandisi ari kubatsirwa kufambisa chigaro. Inogonawo kureva magetsi mavhiripu izvo zvinowanzofambiswa nemushandisi achifambisa chimuti chemufaro chichisimbisa mafambiro echigaro.
Push kubatsira macheya ane mavhiri madiki nguva zhinji, izvi zvinodaro nekuti kana iri wiricheya yemawoko, mushandisi anofanirwa kubatsirwa kuti akwanise kufambisa sezvo asingakwanise kusvika kumavhiri ekumashure kuti azvifambise. Zvesimba mavhiripu, mavhiri madiki nekuti mushandisi haadi kupindirana nemavhiri kuti chigaro chifambe. Pane kudaro vanofanira kushandisa joystick inodzora kufamba kwechigaro
Kuti ukwanise kubatsira mumwe munhu mukusunda chigaro, munhu wacho anofanira kukwanisa kusundira huremu hwecheya pamwe nemushandisi akagara. Mushandisi anozogona kugona kufambisa ese mawoko sezvo ivo vachizenge vachifamba nechinhu chimwe chete seicho chinosimudzira chigaro.